Shirkadaha ganacsiga Imaaraadka iyo Israa’iil oo bilaabay iskaashi | Gaaroodi News
Shirkadaha ganacsiga Imaaraadka iyo Israa’iil oo bilaabay iskaashi
August 16, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
Shirkad laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa heshiis ku saabsan cilmibaaridda cudurka Covid-19 ah la saxiixatay shirkad laga leeyahay israa’iil.
Heshiiskan ayaa dhexmaray shirkada sameysa cilmibaaridda oo algu magacaabo Tera Group oo fadhigeedu yahay Tel Aviv- iyo shirkadda Imaaraadka, ee APEX.
Wakaalada wararka rasmiga ah ee Imaradka ayaa sheegtay in shirkada APEX ay la saxiixaday “heshiis istaraatijiyad ganacsi ” shirkadda Terra Group.
Bayaanka ayaa lagu sheegay in labada shirkadood ay iska kaashan doonaan cilmibaarid la xiriirta feyriska faraha ba,an ku haya caalamka ee Corona.
Wakaalada wararka ee Imaaraadka ayaa ka soo xigatay agaasimaha shirkadda APEX, Khalifa Youssef Khoury, in heshiiskani yahay”kii ugu horeeyay ee ganacsi oo albaabka u furaya inay iskaashi dhaqaale yeeshaan shirkadaha ganacsiga ee Israa’iil iyo Imaaraadka.”
Saxiixa heshiiskan ayaa Sabtidii waxaa uu ka dhacay magaalada Dubia ee dalka Imaaraadka.
Waxaa heshiiskani loo arkaa inuu yahay tallaabadii kowaad ee loo qaaday dhanka hormarinta ganacsiga, dhaqaalaha iyo iskaashi ganacsi oo dhexmara labada dhinac.
Heshiiskan ayaa ku soo beegmaya ka dib markii khamiistii la shaaciyay inay heshiis xiriir diblamaasiyadeed dib logu soo celinayo kala saxiixdeen Israa’iil iyo Imaaraadka Benjamin Netanyahu iyo Mohammed Al Nahyan
Maxaa ka mid ahaa qodobadii heshiiskii Khamiista?
Toddobaadyada soo socda ayaa waxaa kulan yeelan doona ergooyiin ka kala socda Imaaraadka iyo Israa’iil si loo saxiixo heshiisyo laba geesood ah.
Heshiisyadan ayaa ah kuwa la xiriira maalgashiga,dalxiiska,duulimaadyo toos ah, ammaanka,isgaarsiinta, tiknoolajiyada,tamarta,caafimaadka,dhaqanka iyo deegaanka.
Waxaa sidoo kale ka mid ah in labada dhinac ay is waydaarsadaan safiiro.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka, Anwar Gargash, ayaa sheegay aqoonsiga ay Imaaraadak aqonsadeen Israa’iil inay ahayd “tallaabo geesinnimo leh “.
Sida looga falceliyay?
Rai’sul wasaaraha UK Boris Johnson ayaa soo dhaweeyay waxaa uuna sheegay in ay tahay tallaabo loo qaaday dhanka nabadda bariga dhexe.
Madaxwaynaha Masar cabdul Fattah al-Sisi ayaa dhankiisa soo dhaweeyay heshiiska, halka wasiirka arrimaha dibadda Urdun uu sheegay in heshiiskan uu gacan ka geysan doono in wadahadaladii istaagay al sii wado.
Madaxweyne Erdogan oo khudbad ka jeediyay telefishenka ayaa sheegay in dalkiisa ay dhici karto in uu xiriirka u jaro Imaaraatka, waxaana sababta uu ku sheegay xiriirka ay la yeelaneyso Isra’iil.
“Tallabaad la xiriirta arrinta Falastiin, ma ahan mid inaga dageyso, waxaa laga yaabaa in aan qaadno tallaabo aan meesha uga saareyno xiriirka diblomaasiyadeed ee naga la dhaxeeya Abu Dhabi, waxaana dhici karta in aan u yeerano safiirka halkaa inoo fadhiya,” ayuu yiri madaxweyne Erdogan.